मेरा दैनिकीका पानाहरूबाट: एक (From the Pages of My Diary: One) – Kathmandu Baptist Church 'Ebenezer'
Posted on November 10, 2017 Posted By: UJ Gurung Categories: From Ps UJ's Diary
२१ माघ, २०४० शनिबार
आज काठमाडौं बप्तिस्ट मण्डली ‘एवेनेजर’मा मिसिनरी म्याक सांगलीरले ‘बप्तिस्मा’ को विषयमा सिकाउनु भयो। हामीहरूले सत्यको वचन सुनेर विश्वास गरेका छौं। अब उहाँको महिमाको प्रशंसा प्राप्त गरिनसकुञ्जेल पवित्र आत्मा वैनाको रुपमा पाएका छौं। अब बप्तिस्मा के हो? बप्तिस्मा कसको लागि? बप्तिस्मा किन दिइन्छ? प्रभु नै प्रभु र मुक्तिदाता हो भनी विश्वास गर्नेहरूलाई बप्तिस्मा दिइन्छ। (रोमी ६:३-६)।
२८ माघ २०४० शनिबार
आज एवेनेजरमा मिसिनरी डेविड क्लाउडबाट ‘विवाह’को विषयमा सिकाएको थियो। मानिस एक्लो रहन असल छैन। किन? मानिस एक्लो रहन सक्दैन। मानिसलाई साथीको आवश्यकता पर्दछ, सन्तानको आवश्यकता पर्दछ। एक पुरुषले पत्नी पाउनलाई प्रभुमा धैर्य गरी बसेको, निश्चित भई बसेको र सुहाउँदो श्रीमतिको लागि प्रभुमा पर्खिरहेको हुनुपर्दछ। उत्पत्ति २:१८।
२९ माघ २०४० आइतबार
आज एवेनेजरमा डेविड दाईले ‘मण्डली’ को विषयमा सिकाउनु भएको थियो। मण्डलीमा नयाँ गरी जन्मेकाहरू हुनुपर्दछ। मण्डलीको उद्देश्य सुसमाचार प्रचार हुनुपर्दछ। मण्डलीमा राम्रो सिकाइनुपर्दछ। योग्य प्रचारकद्वारा मण्डलीमा आवश्यक शिक्षा दिइनुपर्दछ। हाम्रो जीवन आफ्नो होइन तर प्रभुको हो। प्रभु मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो जीवन मण्डलीलाई सुम्पेको हुनुपर्दछ।
३ फागुन २०४० बुधबार
आज एवेनेजरमा ‘अगुवाहरू’को विषयमा सिकाइएको थियो। आफ्ना अगाडीका अगुवाहरूलाई संझनुपर्दछ, साथै अगुवाकै अधिनमा बस्नुपर्दछ। किनकि हाम्रो आत्मिक रक्षकको रुपमा अगुवाहरू रहेको हुन्छ। हिब्रू १३:७,१७।
१० फागुन २०४० बुधबार
आज एवेनेजरमा अन्यभाषाको विषयमा सिकाइएको थियो। प्रेरित २:१-६। यरुशलेममा भेला भएका यहूदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने उद्देश्यले सर्वप्रथम परमेश्वरले अन्यभाषाको वरदान दिनुभएको थियो (प्रेरित २:१-६)। पवित्र आत्माले भरिएपछि अन्यभाषा बोल्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। स्तिफनसले पवित्र आत्माले भरिएपछि अन्यभाषा बोलेनन् तर उनले स्वर्ग खोलिएको तथा ख्रीष्ट उभिरहनुभएको गवाही दिए (प्रेरित ७:५५)। पावलले पवित्र आत्माले भरिएपछि अन्यभाषा बोलेनन् (प्रेरित ९:१७,२०)। उनले पवित्र आत्माले भरिएपछि झूटो शिक्षालाई हप्कायो (प्रेरित १३:९-१०)।
१२ चैत्र २०४० आइतबार
आज घरेलु संगति, लाजिम्पाटमा पुरुषोत्तम नेपालीले ‘ख्रीष्ट’को विषयमा सिकाउनु भएको थियो। ख्रीष्ट परमेश्वरद्वारा पठाइएर आउनुभयो। जब हामी उहाँलाई ग्रहण गर्दछौं तब हामीले पवित्र आत्मालाई पनि पाउँदछौं। यूहन्ना ५:१,२,६।
१५ चैत्र २०४० बुधबार
आज एवेनेजरमा पुरानो नियमको विषयमा सिकाइएको थियो। एफिसी १:९-१०। पुरानो नियमको उद्देश्य आउनेवाला येशू ख्रीष्टको बाटोलाई तयार गर्नु हो। यस संसारमा परमेश्वरको योजना सम्बन्धमा यस भागले उदाहरण प्रश्तुत गर्दछ।
२२ चैत्र २०४० बुधबार
आज एवेनेजरमा भविष्यवाणीको विषयमा सिकाइएको थियो। प्रकाश १:७। भविष्यवाणी अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ किनकि भविष्यवाणी सत्य छन्। ती पूरा हुँदै आइरहेका छन्। यसले धिरज उत्पन्न गराउँछ। यसले होशियारी तुल्याउँछ किनकिन उहाँ चाँडै आउँदैहुनुहुन्छ। प्रकाश २२:७,१२।
२९ चैत्र २०४० बुधबार
आज एवेनेजरमा पाप र मुक्तिको सम्बन्धमा सिकाइएको थियो। उत्पत्ति ३:६। पापको परीक्षा किसिम किसिमका छन्। हेर्दा रहर लाग्दो, बुद्धिमान हुने, खानालाई मीठो आदि स्वरुपमा ती हुन्छन्। संसारका चीजलाई प्रेम गर्दा परमेश्वरमा भएको प्रेमलाई गुमाइन्छ।
१ बैसाख २०४१ शुक्रबार
पुतली सडक, काठमाडौं
आज बेथशालोम चर्च पुतली सडकमा पास्टर दिलिप क्षेत्रीले स्तुति प्रशंसाको विषयमा सिकाउनुभयो। स्तुति प्रशंसा उहाँलाई स्वीकार्ने हाम्रो ओंठको फल हो (हिब्रू १३:१५)। पास्टर निकानोर तामाङले ‘संसारलाई प्रेम नगर’ भन्ने विषयमा सिकाउनुभयो (१ यूहन्ना २:१५-१७)। संसारलाई प्रेम गर्नुहुँदैन जुन प्रेम परमेश्वरबाटको होइन। झूटो शिक्षा, बेठीक कुराहरू, अभिमानी जस्ता कुराहरूले शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखी उत्पन्न गर्दछ। पा. रवर्ट कार्थकले ‘यहूदा स्करयोती’ को विषयमा सिकाइएको थियो (यूहन्ना १२:४)। ख्रीष्टले यहूदा स्करयोतीलाई चिन्नुहुन्थ्यो तर पनि उहाले उनलाई चेलाको रुपमा छान्नुभयो, कोषाध्यक्ष बनाउनुभयो। उनको गोडा धुनुभयो। यो कति अचम्मको कुरा थियो। यो पनि अचम्म लाग्दो कुरा छ कि उहाँले हामी जस्ता पापीहरूलाई किन चुन्नुभयो?
२३ बैसाख २०४१ शनिबार
आज एवेनेजरमा म्याक दाज्यूले उडाउ पुत्रको विषयमा सिकाउनु भएको थियो। लूका १५:११-२४। उडाउ पुत्र आफ्ना पिताजीसंग आनन्दसाथ जिइरहेका थिए। तर उनले आफ्नो अंश लिई परदेशिएपछि उनले भारी संकटको सामना गर्‍यो। त्यस अवस्थामा उनले आफ्नो पापहरूबाट पश्चात्ताप गर्‍यो र पिताजीसंग क्षमा माग्यो। पिताले उक्त उडन्त पुत्रलाई स्वीकार्नुभयो। त्यसरी नै मानिसको सृष्टि गरिंदा उसले अत्यन्तै आनन्दित जीवन विताइरहेका थियो। तर मानिस परमेश्वरलाई त्यागी आफ्नै इच्छामा हिंड्यो। त्यसको प्रतिफल मानवजातिले भयंकर रुपमा भोगिरहेका छन्। तर यदि कसैले पश्चात्ताप गरी परमेश्वर पिताकहाँ फर्कीआएमा उनलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुहुनेछ र आफ्नो पुत्रको रुपमा ग्रहण गर्नुहुनेछ।